Ekpere nye Saint Cyprian. ? Nchedo, eke, eke na achị
Ekpere San Cipriano. A maara ya maka inwe ọtụtụ ike nke eluigwe. Mee ya ikpegara St. Cyprian maka nchebe, ịracha na ịchịkwa nwere ike inyere anyị aka n'ọtụtụ ọnọdụ nke ndụ.
Karịsịa n'ọnọdụ ndị ahụ ebe anyị chere na enweghị ngwọta. Ọkachamara na idozi nsogbu nke ndị di na nwunye ebe otu n'ime ha kpebiri ịhapụ ihe ndina ọ bụla.
Agbanyeghị, ike ha nwere ike inyere anyị aka iche na echedoro anyị ma ọ bụ nwee ọganihu. Na ekpere Ha dị ike mgbe niile ma mgbe ị tinyere n’ime ha okwukwe niile ị nwere na ọrụ ebube anaghị ewe oge iji rute anyị.
Ugbu a, ọ bụ ihe nzuzo ga-ewetara anyị ụma ụma ọzọ n’ịmata ebe Ekpere kwesiri ikpe.
Nke ọ bụla dị irè ma ọ bụ na-adịchaghị mma dabere n'okwu anyị na-arịọ maka enyemaka.
N'okwu a San Cipriano dị ike ma nwee ike inyere anyị aka n'ọnọdụ anyị chọrọ ịkwanyere ma chịkwaa mmadụ ma ọ bụ ọnọdụ ụfọdụ.
1 Ebumnuche nke ekpere St. Cyprian
1.1 Ekpere St Cyprian ka o kpoo m
1.2 Ekpere Saint Cyprian maka nchebe
1.3 Ekpere Saint Cyprian ka o kee, akara na ichi
1.4 Maka ego ahụ
Ebumnuche nke ekpere St. Cyprian
San Cipriano na-enyere ndị mmadụ aka ihe niile na ndụ ha.
N'ime ederede a anyị ga-egosipụta opekata mpe ahịrịokwu 4 maka ebumnuche dị iche.
Ekpere a ga-ejere:
Ka m kpọọ m;
Iegha, ịhụnanya na achịkwa;
Ego na oganihu.
N'ụzọ bụ isi, ekpere ndị a ga-enyere gị aka na ndụ gị niile, site na ego na ịhụnanya.
Iji nweta nsonaazụ kachasị mma naanị ị ga-eji okwukwe jiri ekpere na ikwere ike nke St. Cyprian.
Ekpere St Cyprian ka o kpoo m
Saint Cyprian, onye agọziri agọzi n’etiti ndị nsọ, a na m arịọ gị amara.
Mee (...) chee na ịchọrọ m nso, na ị nweghị ike iguzo na ọnweghị m kpọọ m. Mee ka ekwentị m kpọọ ma enwere m ike ịnụ olu (...) n'akụkụ nke ọzọ.
Saint Cyprian, onye pụrụ ime ihe niile, nye m ọchịchọ a dị mfe, gee ntị n ’olu dị nro (()) nwee ike inwe mmetụta, ịnụ ụtọ ya na ife ya ọzọ. San Cipriano, kwenye (...) ịkpọ m, ebe ọ bụla m nọ ma ugbu a.
Mee ka m kpọọ ekwentị m maka na ịchọrọ ige m ntị ma na-achị ọchị ma ọ bụ na-ebe ákwá n'akụkụ m.
Onye m hụrụ n’anya San Cripriano, n’ọba gị ka m na-ekele gị, dịkwa ka ohu dị umeala n’obi, aga m agbasa ebube gị ebe ọ bụla m na-aga.
Ka ọ dịrị. Yabụ na ọ ga-adị.
Emekeme ndibọn̄ akam emi ke ediwak idaha, man anam ndifiak nda ye owo oro m ordịghe ọtọn̄ọ ufan.
Ọ bụ na ịkọwapụta azụmahịa maka ahịrịokwu a dị irè.
Ọ dị mkpa na aha onye anyị chọrọ ka ị kpọọ anyị na ebumnuche anyị chọrọ ka oku kwuo.
Ọ bụrụ n’anyị enweghị ihe doro anya, anyị nwere ike ibu ụzọ mee atụmatụ maka Ekpere siri ezigbo ike ọ dịkwa mma ịme ya mgbe ihe niile doro anya na ịghara ịrịọ maka ezighi ezi.
Ọkụ kandụl ma ọ bụ ime ya n’oge a na-ekpe ekpere a dabere n’onye ahụ, ihe a na-atụ aro ka ị wepụta oge tụkwasị uche n’ekpere ahụ.
Anyi apughi ikpe ekpere mgbe uche di n’ihe ozo, anyi aghaghi ileba anya n’ariri aririo a na-eme ka anyi wee juo ihe a choro.
Ekpere nye St. Cyprian maka nchebe
Virtuosísimo San Cipriano, Bishọp nke Kọrịnt, ana m arịọ gị maka ịhụnanya Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na-ekwupụta maka gị, mee ka m nwere onwe m pụọ na mwakpo nke ajọ onye iro, mee ka iwe ya ghara iwesa m iwe.
Zọputam site na mberede na mberede, oké ifufe, àmụ̀mà, oku na ndị agbataobi na-enweghị nsogbu. Ọ bụrụ na m daa n'ụlọ mkpọrọ, kasie m obi ma nyere m aka pụọ ​​na nsọpụrụ ya, onye isi m buliri elu.
N'ime ndị anyaụfụ na onye ọjọọ jọgburu onwe m, wepụ m.
Yiri uwe m kpuchie m n’ihe egwu niile dị n’ihu m, ebe ọ bụ n’arịrịọ gị ka m ji obi umeala jụọ Chukwu Nsọ, Chukwu Nna, Chukwu Ọkpara na Chukwu Mụọ Nsọ.
Nke a bụ otu n'ime nchegbu ndị mmadụ na-echekarị, ọ bụ maka ya rịọ maka nchebe maka anyị ma ọ bụ maka ezinụlọ, San Cipriano bụ onye Saint nwere ike inye anyị arịrịọ a.
Onye n’echebe ike n’okwu niile.
A ga-ebu ụzọ kpee ekpere nke Saint Cyprian maka ịghọta ikike nke Saint Cyprian iji chebe anyị, mgbe ahụ ekwesịrị ịrịọ nchekwa dịka o kwere mee, na-enweghị ọtụtụ ntụpụ.
Ugbu a, na nzọụkwụ ikpeazụ, a na-enye ekele maka ọrụ ebube nke nchebe dị ka ihe ịrịba ama nke okwukwe. N'ụzọ otu a anyị na-emechi ekpere siri ike iji nweta nchebe n'oge niile.
Ekpere Saint Cyprian ka o kee, akara na ichi
“Ike gị dị ukwuu, ukwu gị, Senti Cyprian, onyeozi nke ndị na-ata ahụhụ n'ihi ịhụnanya, ka ike gị na-enweghị atụ meere m, ihe m na-atụ anya ya taa.
Mee n’aha nke nrara m nye aha gi, ooh! Onye nkem nke ebube di ebube na onye no na nkpagbu, (juo aha onye ichoro) chigharikute m, n’anu na nkpuru obi na o nweghi onye diri ya kari m.
Na ọ chọrọ m ma hụ m n'anya m ma na-achọ m ebe niile n'agbanyeghị na ọ maara na ọ nọghị, na ọ na-enwe olileanya maka m, maka ịnọ n'akụkụ m mgbe niile na ọ na-etinye onwe ya n'olileanya nke ịnọ n'ihe ndina m, na tebụl m na ndap
Onye-ozi di ike, i bu onye dibia maka ihe iriba ama gi na idi nso n’idi nso gi, arapulam ugbu a!
Achọrọ m ọkụ gị, enwu enwu na-enwu enwu, dị ebube ọrụ ebube, iji chụpụ onye nzuzu ahụ na-eripịa m olileanya ịdị be ya ruo mgbe ebighi ebi.
Ka ọ bịaruo taa inye m ohu ya na mmetụta nke ntụkwasị obi na mkpụrụ obi dị ụtọ ma dị nro, O Onyenwe anyị na ị nụrụ ihe niile, ahapụla m na nke a na nhụjuanya nke enweghị enyemaka / ma ọ bụ na enweghị ịhụnanya na enweghị ịhụnanya ya.
Nke ahụ na-abia na nrọ m na ihe m kwere na ya na nkwa iji mezuo ya na site na ichoro ka m mee ka ọ mezuo. Senti Cyprian, gerem nti, n’oge oku a, aririo m na-aga!
Bute m na nke ahụ m hụrụ n'anya, ugbu a weta m ya n'ihi na m na-ada mba na enweghị ọnụnọ ya, biko, onye ọrụ ebube ... gee ntị n'ekpere m, ya na onye otu gị Justina na nwanyị, onye gị na ya so n’ozi gị dị nsọ nye ndị niile anyị na-ajụ ...
Ọ dị mma, gee m ntị!… Amen. ”
Getting nweta mmetụta a na mmadụ atọ a bụ ọrụ ebube.
Nke a bụ ya mere e nwere ekpere pụrụ iche maka rụzuo ya nke ọma ma na-adịgide.
Ugbu a ị ghaghị ịmara nke ọma ebumnuche gị, debe mmadụ n'akụkụ gị ike ma ọ bụ ime ya ihe anyị chọrọ abụghị ihe kachasị mma maka ahụike dị ogologo oge nke di na nwunye ahụ.
Agbanyeghị, ekpere ndị a dị ike nke na anyị ga-eme ya n'eziokwu.
O zuru oke maka jikọtara ọnụ, zuo ike ma chịa Nwoke, enyi ma obu onye amara. Ọ na - arụ ọrụ na onye ọ bụla.
Maka ego ahụ
Ezigbo onye m hụrụ n'anya na Saint Cyprian, ekwenyesiri m ike na ịdị mma gị dị nsọ nakwa nke ịnụ ọkụ n'obi gị na ntinye Ikpe Ziri Ezi na onye-nwe-ayi.
Napụta m n'aka chi ọjọọ, na ihe ọjọọ. Nye m ngọzi gị ma kwalite ọnọdụ m. Anaghị m arịọ gị maka lọtrị, ma ọ bụ ego ozugbo ị ga-abata n’ụbọchị.
Ọrụ dị mma iji na-akpata ego maka ezinụlọ m ezuola.
O Saint Cyprian, ji arịrịọ obi umeala a enwere m olileanya inweta ngozi gị igbanwe akara aka m na nke m.
N'ime ụwa nke nọ na nsogbu na-abawanye, ego na-abụ ọrụ ebube ka ịnwe ya na iwepu ya na uche.
Ọ bụ ya mere anyị ga-eji kpee ekpere maka St. Cyprian maka ego.
Rịọ na ego na-erubata n'aka anyị mgbe niile bụ ezigbo nhọrọ iji hụ na ahịa niile anyị na-aga.
Kpee ekpere ma jụọ San Cipriano maka ọrụ ebube nke ego na ọrụ ka ọrụ ebube ahụ rute ngwa ngwa o kwere omume, cheta na ọ bụghị naanị ikpe ekpere kama ime ihe ga - ekwe omume iji mezuo ihe anyị chọrọ.
Nke bu eziokwu bu na otutu ndi mmadu choro enyemaka na ihe di iche iche na ndu ha. Mgbe nke a mere, aga-ekperịrị ahịrịokwu niile dị n’isiokwu a.
I nwere ike kpee ekpere niile, mana ọbụghị otu ụbọchị. Anyị na-akwado ka ị hapụ ụbọchị izu ike 1 n'etiti ekpere ọ bụla.
Ọ dị mkpa ịghara ikpe n'otu senti dị iche iche n'otu ụbọchị, ma ọ nwere ike ghara ịga arịrịọ ọ bụla.
Yabụ, kpee ekpere nke St Cyprian ka o kee, zuo ike, ka ọ nwee ike chebe gị maka ụbọchị dị iche iche.